Archive du 20190216
Fifidianana Solombavambahoaka Hampijoro kandida vonon-kandresy ny “TIM.K25”
Tsy ao anaty rafi-panjakana intsony ny avy amin’ny Antoko Tiako I Madagasikara, taorian’ny faharavan’ny governemanta sy ny antenimieram-pirenena.
Olon`ny HVM Hovizanina tanteraka ?
Araka ny efa notaterina teto dia manahy valifaty politika ny olon`ny HVM.
Famarotana ny zaridainan’Antaninarenina Handray fepetra hentitra ny kaominina (CUA)
Misy milaza fa mivarotra tany ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) ka voatonona tao ny zaridainan’Antaninarenina. Manambara sady manamafy mazava ny fiadidiana ny tanàna tarihan’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana fa tsy nivarotra ny zaridainan’Antaninarenina izany izy ireo.